Nkwalite: Gbanwee ndị mgbere Email na-enweghị Agbanwe UI Gị! | Martech Zone
Mgbe m na-arụ ọrụ na email na-eweta ọrụ dị ka ngwaahịa faili, M wee na a atụmatụ na nwetara m nnọọ ole na ole iberibe anya internally. N'oge ahụ anyị nwere ndị mmepe ole na ole na-arụ ọrụ na anyị API kwa ụbọchị ma anyị nwere ọtụtụ iri na abuo na-arụ ọrụ na njirimara onye ọrụ anyị. Njirimara onye ọrụ bụ ọtụtụ nde nke koodu ma debe nkwado anyị na tebụl njikwa akaụntụ na-arụ ọrụ ụbọchị niile. N'aka ozo, nke anyi API na-ezipụ ozi email ọzọ ma, ozugbo onye ahịa ahụ biliri, anyị adịchaghị anụ ya ọzọ.
Echiche m? Mee njirimara onye ọrụ iji jiri ya API wee nye onye ọrụ interface pụọ. Nke ahụ ziri ezi… naanị mepee isi mmalite ya ma tinye ya n'ahịa. Kwe ka ụlọ ọrụ jiri ihe ọbụla ha chọrọ ma wepu ndị ọzọ. Companyjọ jidere ụlọ ọrụ ahụ na m ga-ewepụta ụdị atụmatụ ahụ. O di nwute, ha amaghi na uru ha wetara bu izipu ozi, adighi ewuli ya. Na-ekwu okwu bụ ngwụcha ngwụcha nke na - ejikọ ndị na - enye ndị ọrụ email mba ụwa site na nyiwe OngageConnect ha.
OngageConnect ™ bụ usoro izizi email izizi ụwa nke ejikọrọ na ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email (ESPs). Nke a na-enye ụlọ ọrụ ohere ka ha na-ebugharị ozi ịntanetị ha site na ọtụtụ ndị na-ere ahịa site na njedebe njedebe. Ọ bụkwa ihu ahịa azụmaahịa email maka igwe ojii SMTP relay ọrụ. Uru a na - enyere ndị otu ike ijikọ ike nke ọtụtụ ESP na SMTP relays, iji bulite ozi ịntanetị ma bulie arụmọrụ ahịa email yana ROI.
Dabere na ihe ị chọrọ, ịnwere ike izipu ozi ịntanetị ọnụ ala site na Amazon SES, ọrụ SMTP nke igwe ojii, ma ọ bụ ụyọkọ ndị na-enye ọrụ email. Ricnye ọnụahịa bụ akụkụ dị nta nke ọnụahịa ya nke ndị ọzọ na - enye ọrụ - ọ dị gị mkpa inyocha ha!
Tags: nnukwu emailimewe emailemail Marketingozi emailemail n'elu ikpo okwuozi emailemail ọrụ interfaceibu